VOA Radio | mandalar.net
You are hereHome VOA Radio
Voa news international -
Sun, 05/19/2013 - 18:06
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ အခု ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း ကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရုပ်မြင်သံကြားကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ့် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အထူးသဖြင့် ဗွီအိုအေ အပါအ၀င် ဗွီအိုအေကနေ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပပေးမယ့် ဒီစီ အနီးတ၀ိုက်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကနေပြီးတော့၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူငယ်ရေးရာ ဘက်ပေါင်းစုံက အသိုင်းအ၀ိုင်းက သမ္မတကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ မေးချင် တာ၊ နှုတ်ဆက်ချင်တာတွေနဲ့အတူ တွေ့ဆုံပွဲကို ... Categories: VOA Radio သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေးအဖြေ
Voa Burmese -
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ အခု ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း ကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရုပ်မြင်သံကြားကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ့် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အထူးသဖြင့် ဗွီအိုအေ အပါအ၀င် ဗွီအိုအေကနေ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပပေးမယ့် ဒီစီ အနီးတ၀ိုက်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကနေပြီးတော့၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူငယ်ရေးရာ ဘက်ပေါင်းစုံက အသိုင်းအ၀ိုင်းက သမ္မတကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ မေးချင် တာ၊ နှုတ်ဆက်ချင်တာတွေနဲ့အတူ တွေ့ဆုံပွဲကို ... Categories: VOA Radio မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၅း၃၀-၆း၃၀ - မေ 20, 2013
VOA 05:30 06:30 -
Categories: VOA Radio သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီး ဦးအောင်ဒင်အမြင်
Sun, 05/19/2013 - 14:21
မေ ၂၀၊ ၂၀၁၃ - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိလာမယ့် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ဒင် ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထား... Categories: VOA Radio သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီး ဦးအောင်ဒင်အမြင်
မေ ၂၀၊ ၂၀၁၃ - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိလာမယ့် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ဒင် ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထား... Categories: VOA Radio အမေရိကန်ရဲ့အရေးယူမှုအားလုံး ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ မြန်မာသမ္မတတိုက်တွန်းမည်
Sun, 05/19/2013 - 08:37
စနေနေ့ညပိုင်း ၀ါရှင်တန်ဒီစီက မြန်မာသံရုံးမှာ မြန်မာမိသားစုတွေ နဲ့ ... Categories: VOA Radio အမေရိကန်ရဲ့အရေးယူမှုအားလုံး ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ မြန်မာသမ္မတတိုက်တွန်းမည်
စနေနေ့ညပိုင်း ၀ါရှင်တန်ဒီစီက မြန်မာသံရုံးမှာ မြန်မာမိသားစုတွေ နဲ့ ... Categories: VOA Radio မြန်မာစံတော်ချိန် ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ - မေ 19, 2013
VOA 21:00 22:00 -
Sun, 05/19/2013 - 08:30
Categories: VOA Radio နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပဲ ဦးစားပေးဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုပန်ကြား
Sun, 05/19/2013 - 07:37
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ၄ ရက်ကြာ ခရီးလာရောက်နေတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ တနင်္လာနေ့မှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမားနဲ့တကွ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆိုင်းငံ့သဘောမျိုး မဟုတ်ဘဲ အပြီးတိုင် ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုမှာဖြစ်ပါ တယ်။ အခုလိုတောင်းဆိုတဲ့ အခါမှာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပဲ ဦးစားပေးဖို့ လိုလားသလို၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကြောင်းပြုပြီး စစ်ရေး အကူအညီတွေပါ တောင်းဆိုမှာ ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင် လှုပ်ရှားသူတွေဘက်က စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ... Categories: VOA Radio နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပဲ ဦးစားပေးဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုပန်ကြား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ၄ ရက်ကြာ ခရီးလာရောက်နေတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ တနင်္လာနေ့မှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမားနဲ့တကွ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆိုင်းငံ့သဘောမျိုး မဟုတ်ဘဲ အပြီးတိုင် ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုမှာဖြစ်ပါ တယ်။ အခုလိုတောင်းဆိုတဲ့ အခါမှာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပဲ ဦးစားပေးဖို့ လိုလားသလို၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို အကြောင်းပြုပြီး စစ်ရေး အကူအညီတွေပါ တောင်းဆိုမှာ ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင် လှုပ်ရှားသူတွေဘက်က စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ... Categories: VOA Radio မြောက်ကိုရီးယား လက်နက်စမ်းသပ်မှု စွန့်လွှတ်ဖို့ ကုလမျှော်လင့်
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ မစ်ဇိုင်းဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်မှုကို စွန့်လွှတ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ စတာလင်ဝါဒကျင့်သုံး တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက စနေနေ့တုန်းက တာတိုပစ် ဒုံးပျံသုံးစင်းကို ပင်လယ်အတွင်းပစ်လွှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
ပြုံယမ်းအစိုရအနေနဲ့ နောက်ထပ် ဒုံးပျံပစ်လွှတ်တာမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့ ရပ်ဆိုင်းနေတဲ့ နျူကလီးယားအရေး ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေ နဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ပြန်စတင်ဖို့ ... Categories: VOA Radio မြောက်ကိုရီးယား လက်နက်စမ်းသပ်မှု စွန့်လွှတ်ဖို့ ကုလမျှော်လင့်
ပြုံယမ်းအစိုရအနေနဲ့ နောက်ထပ် ဒုံးပျံပစ်လွှတ်တာမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့ ရပ်ဆိုင်းနေတဲ့ နျူကလီးယားအရေး ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေ နဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ပြန်စတင်ဖို့ ... Categories: VOA Radio မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆း၀၀-၇း၀၀ - မေ 19, 2013
Sun, 05/19/2013 - 05:30
Categories: VOA Radio ဘက်ခမ်း ဘောလုံးကွင်းကို မျက်ရည်နဲ့စွန့်ခွာ
Sat, 05/18/2013 - 18:59
အင်္ဂလန်က နံမည်ကျော်ကစားသမား ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း (David Beckham) ဟာ သူ့ရဲ့ ကြေးစားဘောလုံးသမားဘ၀ နောက်ဆုံးပွဲကို မနေ့ စနေနေ့က ကစားခဲ့ပြီး၊ ဘောလုံးကစားတာကနေ လုံးဝ အနားယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီ (PSG) နဲ့ ဘရက်စ် (Brest) အသင်းနဲ့ ကစားတဲ့ပွဲ ဟာ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့ ကစားသမားသက်တမ်း နှစ် ၂၀ အတွင်း နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းက အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ ကစားခဲ့ပါတယ်။ ၈၁ မိနစ်မှာ သူ့ကို လူစားလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီပွဲကိုလာကြည့်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေက ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကို မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ ... Categories: VOA Radio ဘက်ခမ်း ဘောလုံးကွင်းကို မျက်ရည်နဲ့စွန့်ခွာ
ဒီပွဲမှာ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းက အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ ကစားခဲ့ပါတယ်။ ၈၁ မိနစ်မှာ သူ့ကို လူစားလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီပွဲကိုလာကြည့်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေက ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကို မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ ... Categories: VOA Radio တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် အိန္ဒိယရောက်
Sat, 05/18/2013 - 18:54
တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် လီကွတ်ချောင်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ၃ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အဖြစ် မေလ ၁၉ ရက် ဒီကနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စတင်သွားရောက် မှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ပထမဆုံး အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်ဟာ အာရှနိုင်ငံကြီး ၂ ခုကြား အချိန်အတော်ကြာကတည်းက ရှိလာခဲ့တဲ့ နယ်စပ်တင်းမားမှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီး၊ နှစ်နိုင်ငံ ဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေး နဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကို တိုးချဲ့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူး စတင်ချိန်ကစပြီး၊ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပထမဆုံး ပြည်ပ ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ သူဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအပြင် ပါကစ္စတန်၊ ဂျာမနီ နဲ့ ... Categories: VOA Radio တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် အိန္ဒိယရောက်
ဒါဟာ ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူး စတင်ချိန်ကစပြီး၊ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပထမဆုံး ပြည်ပ ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ သူဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအပြင် ပါကစ္စတန်၊ ဂျာမနီ နဲ့ ... Categories: VOA Radio ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီး ပထမနေ့
အခု သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာအစိုးရကြားလည်မှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးမြှင့်ဖို့၊ အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ရုပ်သိမ်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတခရီးစဉ်မှာပါလာတဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။ ၀ါရှင်တန်ဒီစီကို စနေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ ညနေဘက် သံရုံးမှာ မြန်မာမိသာစုတွေနဲ့ မတွေ့ဆုံခင်မှာ ၀ါရှင်တန်မြို့တော် ထဲက အထင်ကရနေရာ တချို့ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်နေရာတွေသွားကြည့်တယ် ... Categories: VOA Radio ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီး ပထမနေ့
အခု သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ မြန်မာအစိုးရကြားလည်မှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးမြှင့်ဖို့၊ အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ရုပ်သိမ်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတခရီးစဉ်မှာပါလာတဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။ ၀ါရှင်တန်ဒီစီကို စနေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ ညနေဘက် သံရုံးမှာ မြန်မာမိသာစုတွေနဲ့ မတွေ့ဆုံခင်မှာ ၀ါရှင်တန်မြို့တော် ထဲက အထင်ကရနေရာ တချို့ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်နေရာတွေသွားကြည့်တယ် ... Categories: VOA Radio သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဝါရှင်တန် မြန်မာမိသားစုနဲ့တွေ့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ တရားဝင်ခရီးစဉ် နဲ့ ရောက်ရှိနေတဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ အခု ဗွီအိုအေမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေ အသံလွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ မြန်မာသံရုံးမှာ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံနေ ပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ဝိုင်းတော်သား ကိုသိန်းထိုက်ဦး ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီပွဲအကြောင်း ကိုသိန်းထိုက်ဦးကို မစုမြတ်မွန်က ဆက်သွယ်ပြီးမေးထားပါတယ်။ အရင်ဆုံးတော့ ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အဓိက ဘာတွေပြောသွားသလဲဆိုတာကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက ခုလိုပြောပြပါတယ်။
“အဓိက ကတော့ ... Categories: VOA Radio Pages1